Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ee McKnight, oo loo cusbooneysiiyey sannadka 2015-2017
Sannadka 2015-ka hadda waa mid buuxa, waxaan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno machadka McKnight Foundation Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah ee cusub, cusbooneysiiyay oo cusbooneysiiyay 2015-2017. Tani waa qodobka labaad ee dukumiintigan muhiimka ah, kan ugu horreeyay oo la sameeyey 2011 iyo la hirgeliyey 2012-2014. Waxaan helnay qiyaas wanaagsan oo ka mid ah qaabkayaga bilawga ah muddada saddexda sano ee hore; waxaan ku faraxsanahay in aan soo saarno midka cusub - qaab waxoogaa fudud leh oo xajiya qaybaha si fiican u shaqeynaya oo dib u eegaya kuwa u baahan qalabka qaarkood - in la isticmaalo muddada saddexda soo socota.
2015 oo ka qaybgalay deeq bixiyayaasha Gobolka iyo Bulshada
Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ee McKnight waa dukumiinti nool, oo ah - sida shaqadeena - waa in loo kobciyaa jawiga isbeddelka haddii ay sii ahaanayso mid faa'iido leh oo muhiim ah. Waxaan si ula kac ah ula qabannay habka furfuran iyo wadashaqeyn habka casriga ah, oo lagu martiqaaday fikrado ka imaanaya daneeyayaasha ku xiran hadafka McKnight ee heerarka oo dhan. Dabcan, guddiga iyo shaqaalaheennu waxay ahaayeen kuwo aad u mashquulsan; laakiin waxaan ku tallaabsanay tallaab dheeraad ah waqtigaan, u jeestay shabakadeena deeq bixiyeyaasha, asxaabta, iyo asxaabta kale ee fikradaha ku saabsan maadeysiga koorsada istaraatiijiyadeed ee ku saleysan iyaga khudbadaha gaarka ah.
Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ka jawaabay jawaabtayadii hore ee blog-marti-gelinta ah ee aan ku soo celinay qaabkii aan u cusbooneysiinay qaab-dhismeedka hore. Waxay farxad u tahay in ay maqasho qirashada McKnight ee ku lug lahaanshaha talaabooyinka la qabsashada ee wax ka qabashada caqabadaha adag iyo isbedelka xaaladaha dibadda. Waxaa sidoo kale jira faallo gaar ah oo ku saabsan mawduucyada barnaamijka shakhsi ahaaneed iyo talooyin ku saabsan arrimaha cusub ee aan tixgelineyno, kuwaas oo dhammaantood lala wadaagay shaqaale ku habboon. Waxaan sidoo kale ka maqlay dhowr saldhig oo aasaasi ah iyo jaaliyado aan faa'iido doon ahayn oo ay adeegsadeen habka qaab-dhismeed ee loogu talagalay dadaalka qorsheynta iyo qorsheynta. Waad ku mahadsantahay inaad ka qayb qaadatid qaabkayaga; Talooyinkaaga ayaa kaa caawiyey samaynta alaabta kama dambaysta ah ee la xidhiidha oo waxtar leh annaga, asxaabteena, iyo lammaaneyaasheenna.
McKnight's Qorshaha Istaraatiijiga ah ee 2015-2017 wuxuu ku hawlan yahay Hagaajinta si loo wanaajiyo isticmaalka dhammaan kheyraadkeena si aan u hormarino hawlgalkeena. Waxay ka tarjumaysaa sii wadista kalsoonideena in awooddeena aan ku gaarno waxtarka qoto dheer ay ku xirantahay oo kaliya waa maxay waan sameynaa, laakiin sidoo kale sida waxaan qabanaa shaqadayada. Waa si balaadhan oo ballaadhan, oo ka tarjumaysa danaha iyo yoolalka barnaamijyada kala duwan ee aynu ku daba galno. (Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ujeedooyinka barnaamijka gaarka ah, istaraatiijiyada, iyo tilmaamaha waa la heli karaa halkan.) Muhiim u ah, istiraatiijiyadani waxay sidoo kale soo dhaweyneysaa Ha'yadda dhowaan iyo dhammeystiran ee fulinta saameynta maalgashiga.
Iyadoo guddi iyo shaqaale ay dukumiintigan hirgaliyeen, waxaanu raacnay a hanaanka waxqabadka la qabsashada waxay ku xiran tahay su'aalaha:
Waa maxay? Maxay tahay macnaha dibadda ee aynu ku daba galno hadafkayaga iyo hadafkeena? Xogta noocee ah, isbeddellada, iyo qaababka aan aragno?
Maxaa sidaas? Maxay yihiin saameynaha isbeddellada iyo qaababka shaqadeena ah ee ah aasaasiyad iyo dhamaan barnaamijyada iyo hawlaha barnaamijyada kala duwan?
Hadda maxaa? Sidee ugu fiican ugu fidin karnaa khayraadkeenna si aan u hagaajinno saameynta aan ku yeelan karno
View View Dhismaha Qaranka ee Minneapolis, Homestay McKnight, laga bilaabo Stone Bridge Bridge
Mabaadiida ficilada la qabsashada waxay taageertaa habka aan u isticmaalno guud ahaan saldhigga iyo barnaamij kasta oo barnaamijka ah si loo hagaajiyo istiraatiijiyadaha waqtigeena si looga jawaabo isbedelka dhaqanka, dhaqaalaha, deegaanka, muuqaalka siyaasadeed, sayniska iyo farsamada casriga. Tusaale ahaan, isbeddellada ku habboon istaraatijiyado badan oo barnaamijyo ah ayaa ka tarjumaya korodhka joogtada ah ee gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo cadaadiska sii kordhaya ee khayraadka dabiiciga ah ee adduunka oo dhan, si loo badalo naafanimada iyo isfaham la'aanta joogtada ah ee jinsiyada iyo qowmiyadda ee gobolka Minnesota. Qoraalada dambe ee boggayaga sannadka oo idil, waxaan rajeynayaa in saaxiibada shaqaalaha McKnight ay baaritaan ku sameyn doonaan isbeddellada muhiimka ah ee muhiimka ah ee saameynaya jihooyinka iyo isbeddelka aagagga barnaamijyada gaarka ah iyo sida aan uga jawaabeyno. Iska ilaali!
Dhanka kale, fadlan ha ka waaban inaad wadaagto wixii fikrado ah ama su'aalo ah markaad akhrido dukumiintiga, taas oo laga yaabo inaad u maleyneyso in uu yahay buug yar oo loogu talagalay McKnight saddexda sano ee soo socota. Iyo, had iyo jeer, waxaanu u mahadcelinaynaa deeq bixiyayaasha iyo lamaanayaasha shaqada aynu wada qabanno safarkeena la wadaago si loo hagaajiyo tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka.
Tani waxay sidoo kale u muuqataa on Kala hadal Transparency, blog-ka 'Glasspockets', oo ah goob loogu talagalay wada-hadal iyo dhiirigelin wax ku ool ah oo ku saabsan daahfurnaanta aasaasiga ah iyo xisaabtanka. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Glasspockets iyo ballanqaadka McKnight ee daahfurnaanta, riix halkan.